I-Cozy Ranelagh Townhouse (ikhaya le-vegan)
Ikamelo e-i-townhouse ibungazwe ngu-Aoibhinn
Le ndlu encane kodwa ethokomele yasedolobheni iyindawo yokujikijelwa ngamatshe edolobhaneni lase-Ranelagh elisemfashinini nelinempilo, elinezitolo ezinkulu eziningi, izindawo zokudlela, amakhefi, indawo yokuzivocavoca, indawo yokubukela amabhayisikobho, ipaki, njll. Ngaseningizimu yedolobha, iphephe kakhulu. indawo iyonke, enemindeni eminingi ehlala endaweni, futhi ukuhamba nje imizuzu engama-20, noma umjikelezo wemizuzu emi-5-10 ukuya enkabeni yedolobha. Ithilamu ye-Luas, evame kakhulu, ihamba ngezinyawo imizuzu emi-3 ukusuka endlini, futhi izokungenisa edolobheni ngaphansi kwemizuzu eyi-10.
Indlu ihlotshiswe ngesitayela sase-Swedish nesincane kunazo zonke, futhi yonke iklanywe ngokucatshangelwayo ngokunethezeka nokusebenza engqondweni.
Sicela zonke izihambeli zikhumbule ukuthi lena yindlu okwabelwana ngayo futhi okuhlalwa kuyo, ngakho-ke nakuba siyigcina ihlanzeke kakhulu, ayisoze yaba nabala.
IRanelagh iyindawo enhle, ephephile futhi ecebe kakhulu, enezakhiwo eziningi ezinhle zakudala zaseGeorgia. Eduze kwedolobha, nokho ngevayibhu ehlukile yayo. Iseduze nedolobhana lase-Rathmines, elinenxanxathela yezitolo, izitolo zezempilo, amakhefi, amasonto, umtapo wolwazi, i-swimming pool & gym (khokha njengoba uhamba), njll. Le ndawo iseduze nezindawo zekhonsathi njenge-Three Arena, RDS, National Concert Hall, Croke Park, The Aviva Stadium, Whelans, Vicar St, njll.
Ababungazi bahlose ukukunikeza isikhala somuntu siqu esiningi ngendlela ofuna ngayo, futhi, noma nini lapho isikhathi sivuma, bayakujabulela ukuphinde bazibandakanye nalabo abathanda ukusebenzisana okwengeziwe. Siyajabula ukunikeza izincomo kanye nokusiza ngokusemandleni ethu. Sicela uxhumane ngokucacile nanoma yiziphi izidingo futhi sizokwenza konke okusemandleni ukuze sihlangabezane nazo.
Ababungazi bahlose ukukunikeza isikhala somuntu siqu esiningi ngendlela ofuna ngayo, futhi, noma nini lapho isikhathi sivuma, bayakujabulela ukuphinde bazibandakanye nalabo abathan…
UAoibhinn Ungumbungazi ovelele